varotra Vehivavy Iraisampirenena : Foanana Sa Arindra Ny Fampanofàna Tena? – Ampahany voalohany- · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2013 14:23 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, Italiano, English, русский, Français
ONG roanjato avy amin'ny faritr'i Eoropa manontolo no nihaona tao amin'ny Parlemanta Eoropeana tao Bruxelles ny 4 Desambra teo. Nandefa antso iray izy ireo hanafoanana ny fampanofàna tena sady nanolotra ireo faritra iasan'ny politika eoropeana iray ho fanafoanana. Sambany izao no mba nisian'ny adihevitra toy izany tao amin'ny tranon'ny Parlemanta Eoropeana, izay mandrafitra tatitra faobe amin'izao fotoana momba ny tombana amin'ny politika eoropeana mikasika ny fampanofàna tena.
Ho an'ireo mpangataka fanafoanana, ny fanaovana ny fampanofàna tena ho toy ny heloka bevava no fanalahidy hanoherana ny famarotana olona ho amin'ny fitrandrahana azy ireny amin'ny resaka filàna ara-nofo. Ho an'i Grégoire Théry ao amin'ny tranonkala Egalité, sekretera jeneralin'ny “Mouvement du Nid” : « Tsy famadihana ny fampanofàna tena ho araka ny lalàna ny fampanaraham-penitra sy fepetra fa famarotan'olona. Ny fandrindràna ny fampanofàna tena, dia fanomezana alàlana haka tombony amin'ny fampanofàn'ny hafa ny tenany ».
Sarotra ny handroso antontanisa azo antoka momba ny isan'ireo mpampanofa tena iharan'ny fanondranana olona iraisam-pirenena. Etsy andaniny ireo fomba fanao entina hanisàna ireny raharaha ireny dia samihafa isaky ny firenena tsirairay. Etsy ankilany, ilay raharaha koa dia an-katakonana tanteraka mazàna no sehatra isiany ary noho ny tahotra valifaty dia sahirana mafy ireo iharany amin'ny hiampangàna ireo mpanao heloka . Any Soisa, araka ny Birao Federaly misahana ny Antontanisa, fitarainana 147 no voaray nandritra ny telo taona lasa (2009-2011) ary olona 66 monja no voaheloka ho nanao varotra olona hatramin'ny 2000.
Araka ny vaovao vao azo avy amin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa nivoaka ny Jona 2012, olona 21 tapitrisa manerana ny tany no iharan'ny asa an-teivozona sy ny famarotana olona. Amin'izy ireny, 4,5 tapitrisa no trandrahana amin'ny resaka filàn'ny nofo, vehivavy sy ankizy ny ankamaroany. 880 000 no voaisa ao anatin'ny Fiombonambe Eoropeana. “Sandaina euros vitsy monja indraindray”, mampiditra “150.000 Euro afa-karatsaka eo amin'ny ankapobeny izy ireny ho an'ireo firenena tandrefana”, hoy ny Fondation Scelles manitrikitrika.
Asehon'ny Fondation Selles fa ny varotra olona dia nahitàna fitomboana “mampahatahotra” tany Eoropa. Araka ny tatitra navoakan'ny Fondation tamin'ny desambra 2012 nomeny lohateny hoe “Fitrandrahana ara-nofo : fampanofàna tena sy heloka bevava voarindra”, izay manao tombana ny fampanofàna tena tanaty firenena 54, nalamin'ireo mpampanofa olona hanaraka “ny lasitra kapitalista fakàn-tahaka” ny famarotana olona. Ny “chiffre d’affaires” ho an'ny indostrian'ny filan'ny nofo dia tafakatra hatramin'ny 1,5 lavitrisa mahery tao Gresy (izany hoe eo amin'ny 0,70% amin'ny harin-karena faobe) ary hatramin'ny 18 lavitraisa euro ho an'i Espaina, toerana izay ahazoana alàlana sy manaraka fepetra ny fampanofàna tena, toy ny asa hafa rehetra.
Re eny anaty gazety eny ireo feo mankasitra ny fanafoanana azy ity. Re ihany koa any anaty media sosialy any.
Ny 18 desambra 2012, Christine Le Doaré, mpahay lalàna dia nirotsaka homba ny fanafoanana, tao amin'ny bilaoginy “irréductible et solidaire, féministe, quoi !“ – hiringiriny ary miray feo, mpiaro vehivavy, izay! :
Sehatra frantsay iray ahitana ireo nahita fianarana sy mpandàla ny maha-vehivavy nivoaka tamin'ny volana Aogositra no manambara hoe :
[…] ny fankalazana andro iraisampirenena iray, adi-hevitra mikasika ny fanafoanana na fandrindrana ny fivarota-tena [mg] , ny fisotroan-toaka eo am-panamoriana fiara. Fampanantenan'ny kandidà Hollande izay […]
18 Janoary 2013, 01:13